IGolfer Ben Hogan Biography kunye neNkcukacha zoLuntu
UBen Hogan: I-Bio emfutshane yeGosa leGalofu
UBen Hogan ungomnye wemigxobhozo yembali yegalufu, umgcini ophelelekileyo kwi-course apho umsebenzi wakhe wawubandakanya ukuphazamiseka okuphawulekayo kwingozi yemoto.
Umhla wokuzalwa: Agasti 13, 1912
Indawo yokuzalwa: u- Stephenville, waseTexas (uluhlu oluninzi lwemithombo yedolophu yaseDublin, eTexas, njengendawo yokuzalwa yaseHogan. UHogan wakhulela eDublin, kwaye ngumzi wakubo, kodwa wazalelwa esibhedlele eStevilleville, ezili-10 ukusuka kude.)
Wafa: Julayi 25, 1997
Isiteketiso: "I-Hawk" (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuthi "uBantam Ben")
I-PGA Tour: 64
(Uluhlu lwezakhono zoononongo lubonakala ngaphantsi kweHogan bio phantsi kwephepha.)
Amagosa amaninzi: 9
I-British Open: 1953
I-PGA Championship: 1946, 1948
Amabhaso kunye neNhlonipho kaBen Hogan
Umphathi we-PGA we- Tour , 1940, 1941, 1942, 1946, ngo-1948
I-PGA Vardon iTrophy winner (i-average score score), 1940, 1941, 1948
I-PGA Tour Player ka-1948, 1950, 1951, 1953
Ilungu, iqela le-US Ryder Cup, ngo-1947, 1951
I-Captain, iqela le-US Ryder Cup, ngo-1947, ngo-1949, ngo-1967
UBen Hogan: "Ndiyayithiya i- hook ." Ndiyayihlamba xa ndibona enye.
UBen Hogan: "Ndidlala nabahlobo, kodwa asidlali imidlalo yokuzonwabisa."
UDave Marr: "UHogan udlala umdlalo omnye kwaye sonke sidlala enye."
Iimpawu ezingaphezulu zeBen Hogan
Umcimbi wokuqala we- PGA Tour kaBen Hogan yi-1932 Los Angeles Open. Wayegqiba eboshwe kwindawo yeshumi elinesibini, efumana imali yokuhlawula i-$ 50.
UHogan wanqoba i-tournaments ezingama-30 ngaphambi kokuwina umqhubi wakhe wokuqala (1946 yePGA Championship). Leyo yirekhodi yezona zininzi zincinci phambi kokuqala.
Iindawo ezintathu kwihlabathi legalufa zibizwa ngokuba yi- Hogan's Alley ngenxa yokuphumelela kweHogan apho.
Uhambo lokuphuhliswa kwePGA Tour , ekugqibeleni ibizwa ngokuba yiSizwe soKhenketho kunye neWeb.com Tour, ekuqaleni yayibizwa ngokuthi yiBen Hogan Tour xa yasungulwa ngo-1990.
Kukho iimbasa ezimbini zeBen Hogan kwigalufa. Enye iboniswa kwi-golfer yamadoda ekholeji yonyaka; Omnye uhanjiswa kwi-golfer ekhuphisa ukulimala okanye ukukhubazeka ukuqhubeka esebenza galufo.
Umdlalo wegadget oqhelekileyo obizwa ngokuba yiHogies ubizwa ngokuba nguHogan. Kubandakanya ukushaya i-fairway, eluhlaza, kunye no-2-ukubeka umhlathi.
Biography kaBen Hogan
Kwimicimbi ye-PGA Tour ye-292 yomsebenzi, uBen Hogan wagqiba kwi-Top 3 kwi-47.6%. Wagqiba kwi-Top 10 kwi-241 yeziganeko ezingama-292.
UHogan wazalelwa kufuphi ne-Fort Worth ngo-1912. UHogan noByron Nelson babesazi abantwana, ukuxhamla kwi-Fort Worth club. Baye baxhamla umnyaka omnye kwiqonga lobungqingili bebhola (Nelson won).
Ubuntwaneni bukaHogan bubuhlungu - uyise wazibulala, kwaye kukholelwa ukuba uHogan wabona ubungqina obubuhlungu.
UHogan waphenduka umprofeti ngo-1929, eneminyaka eyi-17 ubudala, ukudlala iziganeko zeprogram eTexas. Akazange ajoyine i-PGA Tour ukuya ngo-1932. Uninzi lwalo msebenzi wakuqala, uHogan walwa ne-hook. Kodwa ngenxa yomsebenzi omangalisayo, watshintsha umdlalo wakhe kwi-fade elawulwayo (ngamazwi akhe adumile, "wawukhupha ngaphandle kokungcola"). Ngowe-1940, waqala ukuwina, kwaye kaninzi.
Wayekhumbula iminyaka emibini kwiNdwendwe ngenxa yeMfazwe Yehlabathi II, kodwa wabuyela ngexesha elipheleleyo ngo-1946 waza wawina amaxesha angama-13, kubandakanywa nomsebenzi wakhe wokuqala, u-1946 wePGA Championship.
Ukususela ngo-Agasti 1945 ukuya ngoFebruwari 1949, uHogan waphumelela amaxesha angama-37. Kodwa ngo-1949, waxhatshazwa kabuhlungu kwingozi yemoto, kwaye akazange aphinde akwazi ukudlala ixesha elipheleleyo ngenxa yeengxaki zentsholongwane kwimilenze yakhe.
Kwiinyanga ezili-16 emva kokuphazamiseka - apho u-Hogan waphonsa khona umfazi wakhe ukuba amkhusele njengemoto yabo ehlangene nebhasi - uHogan wabuyela ukuphumelela i- US US Open . Ngaloo ndlela uloyiso lubizwa ngokuthi "ummangaliso eMerion," kuba uHogan unqobile nangona ubuhlungu obukhulu kwaye udlala izimbobo ezingama-36 ngosuku lokugqibela.
Enyanisweni, ukususela ngo-1950 ukuya phambili, uHogan akazange adlale iminyaka engaphezu kwe sixhenxe ze-PGA Tour ngonyaka. Sekunjalo, waphumelela amaxesha angama-13, kuquka amakhanda ayisithupha. Kuze iTiger Woods yenze ngo-2000, u-Hogan wayengowona yedwa oza kuphumelela abadlali abathathu beengcali ngonyaka omnye. Kwakukho ngo-1953, xa uHogan eyinqobile iMaster, i-US Open ne-British Open.
(Akazange adlale umdlalo wePGA ngenxa yokuba loo mihla yabadlali abaphambene neBritish Open .) Ukususela ngo-1946 ukuya ku-1953, u-Hogan waphumelela kwi-majors ayisishiyagalolunye kwi-16.
UHogan wanikela umnqweno ofanayo ukufezekisa kwiiklabhu zegalufu ezenziwe yinkampani ebizwa ngegama lakhe, kwaye iBen Hogan Golf yavelisa ezininzi iiklabhu ezigqwesileyo ezifumanekayo kule minyaka.
Ukuziphatha kwakhe kwikhosi kwakuzolile kwaye kugxile. Kwabanye, uHogan wayedla ngokukhawuleza. Kodwa wayebahlonipha bonke abantu.
UBen Hogan waphonyelwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1974 njengenxalenye yeklasi yokuvulwa.
Ukufunda okungakumbi ngoBen Hogan:
Ngelo xesha uHogan wacebisa ukuba aphephe igrafu
UHogan ngokubeka 'isithintelo' kunye 'ne-sawdust' entloko yakhe
Into uBen Hogan wathetha ngayo xa ebona i-shank
Amabhuku eHogan's Instructional Books
UBen Hogan wabhala okanye wabhala ngeencwadi ezimbini zokufundisa igolfu. Iyokuqala echazwe apha isacinga ukuba kufuneka ifundwe ngabanye abaqeqeshi begalufa namhlanje.
Izifundo ezihlanu zeBen Hogan: Iimfuno zengqungquthela zeGalofu zanamhlanje (zithenga kwi-Amazon)
Igunya leGalofu (lithenga kwi-Amazon)
Uludwe lwee-PGA Tour Wins Tour kaBen Hogan
UHogan wanqoba i-tournaments ezingama-64 namhlanje ezibizwa ngokuba yi-PGA Tour, kunye neendonga ezilisithoba phakathi kwazo. Ulwando lwakhe lokuqala lwePGA Tour lwenzeka ngowe-1938, kwaye ekugqibeleni kwakhe kwaba ngowama-1959. UHogan waphumelela kwezo mpuzu-64 nangona umsebenzi wakhe uphazamiseka yiMfazwe Yehlabathi II kunye neengozi yemoto.
Nalu uluhlu lwempumelelo kaHogan, ngonyaka, ukusuka ngowokuqala ukuya kokugqibela:
I-Hershey ezine-Ibhola (iqela lomdlalo, elihlangene noVic Ghezzi)
I-North ne-South Open
I-Asheville 'Umhlaba weZulwini' Vulekile
I-Miami Biltmore I-International Ball-ezine (iqela leqela, elihlangene neGene Sarazen)
Inverness Four Ball (iqela lomdlalo, elihlangene noJimmy Demaret)
I-San Francisco Vula
I-Portland Iimemo ezivulwayo
I-San Antonio Texas Open
ESt. Petersburg Open
I-Miami International Iine-Ball (iqela leqela, elihlangene noJimmy Demaret)
Inverness Round Robin Iine-Ball (iqela leqela, elihlangene noJimmy Demaret)
INtshatsheli Yehlabathi YeGalofu
Denver Vula iqela lokumema
Glendale Iimemo ezivulwayo
I-Bing Crosby Pro-Am
Ibhantshi Elide Elivulekile
I-Pan American Open
I-Tournament yamaKoloni eMemoya
Isimemo sikaZwelonke samaKoloni
UBelen Mozo weLPGA Tour
Imbali yoLondolozo lwaBomi Candy
Funda Iingxaki Ezibangelwa Ukuphehla Kwemoya
Urhulumente wase-US ugxininiswe Izicelo Zababaleki
Iingcali zeFama - Ubuhle, ukuBambisana kunye nokulula